Izindaba - Yini i-Polyvinyl Chloride (PVC), futhi Isetshenziselwa ini?
Yini i-Polyvinyl Chloride (PVC), futhi isetshenziselwani?
I-Polyvinyl Chloride (i-PVC) ingelinye lama-polymer asetshenziswa kakhulu emhlabeni (eduze kwamaplastikhi ambalwa asetshenziswa kakhulu njenge-PET ne-PP). Kuyinto emhlophe ngokwemvelo futhi echachamba kakhulu (ngaphambi kokungezwa kwama-plasticizers) epulasitiki. I-PVC ibiside isikhathi eside kunamaplastikhi amaningi aqale ukwenziwa ngo-1872 futhi akhiqizwa ngokuthengisa yi-BF Goodrich Company ngawo-1920. Ngokuqhathanisa, amanye amapulasitiki amaningi ajwayelekile ahlanganiswa kuqala futhi aba nokuhweba kuphela ngawo-1940 nawo-1950. Isetshenziswa kakhulu embonini yezokwakha kepha isetshenziselwa nezimpawu, izinhlelo zokunakekelwa kwezempilo, futhi njenge-fiber yezingubo.
I-PVC ikhiqizwa ngezindlela ezimbili ezijwayelekile, okokuqala njenge-polymer eqinile noma engaxutshiwe (i-RPVC noma i-uPVC), bese eyesibili njengeplastiki eguquguqukayo. I-Flexible, plasticized noma i-PVC ejwayelekile ithambile futhi iyakwazi ukugoba kune-uPVC ngenxa yokwengezwa kwama-plasticizers afana ne-phthalates (isib. Diisononyl phthalate noma i-DINP). I-Flexible PVC ijwayele ukusetshenziswa ekwakhiweni njengokufakwa ezintanjeni zikagesi noma ekubekweni phansi kwamakhaya, izibhedlela, izikole, nakwezinye izindawo lapho kuqala khona imvelo oyinyumba, kokunye njengokufaka esikhundleni senjoloba.
I-PVC eqinile iyasetshenziswa nasekwakhiweni njengepayipi lamapayipi wamanzi nolwe-siding okujwayele ukubizwa ngalo ngegama elithi "vinyl" e-United States. Ipayipi le-PVC kuvame ukubhekiswa kulo ngo “hlelo ”lwalo (isb. UHlelo 40 noma uHlelo 80). Umehluko omkhulu phakathi kwamashejuli ufaka izinto ezifana nobukhulu bodonga, ukukala kwengcindezi nombala.
Ezinye zezici ezibaluleke kakhulu zepulasitiki ze-PVC zifaka intengo ephansi, ukumelana nokonakala kwemvelo (kanye namakhemikhali nama-alkali), ukuqina okuphezulu, namandla aqine okuqina epulasitiki uma kwenzeka i-PVC eqinile. Itholakala kabanzi, isetshenziswa ngokujwayelekile futhi ivuseleleka kalula (ihlukaniswe ngekhodi yokuhlonza i-resin “3”).